Samsung Galaxy Rịba ama 7 Vs Samsung Galaxy S7 Edge, duel nke titans | Akụkọ akụrụngwa
Kemgbe ọtụtụ ọnwa, anyị enweela ike ịgụ ma nụ oke asịrị banyere ndị a Samsung Galaxy Rịba ama 7, nke esesịn ama eze n'ihu, na-akwado aha ya na mbụ juru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile na njirimara ya na nkọwa ya, nke na-ahapụbeghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla n'ọnụ ya meghere maka ihe dị iche iche na nke dịgasị iche iche, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Ugbu a anyị matara ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea, oge eruola ịmalite iji atụnyere, ma malite na anyị ekpebila ibute nnukwu Samsung na nnukwu ntụle nke ahịa, nke bụ onye ọzọ karịa obere ya nwanne?, the Galaxy S7 onu. Mmadụ bịa ka Samsung Galaxy Rịba ama 7 Vs Samsung Galaxy S7 Edge, ezigbo duel nke titans nke abụọ n'ime ọnụ ahịa kacha mma n'ahịa ekwentị.
Tupu ịmalite, ọ dị mkpa icheta na Samsung Galaxy S7 Edge dị na ahịa ruo ogologo oge, na na Mobile World Congress na-esote anyị ga-ahụ Samsung Galaxy S8 na nke ahụ, na n'ime izu ndị na-abịanụ, Galaxy Note 7 n'ụzọ gọọmentị n'ahịa.
1 Kere; abụọ ịrụ ụka adịghị ya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa
3 Galaxy S7 Edge Atụmatụ na nkọwa
4 Ihe ngosi Galaxy 7 na nkọwa
5 Sọftụwia na arụmọrụ
6 Igwefoto, izu okè ka dị
8 Ọnụahịa na mmechi
Kere; abụọ ịrụ ụka adịghị ya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa
Samsung jisiri ike n'oge na-adịbeghị anya karịa onwe ya, na-emezi atụmatụ ọ gosipụtara anyị na smartphones dị iche iche ọ na-ebupụta na ahịa. Ikpeazụ ya abụọ releases, na Galaxy S7 Edge na Galaxy Cheta 7 anyị nwere ike ikwu na ha nwere otu imewe, nnọọ ukwuu na-enweta ruo ikpeazụ nkọwa.
Ugboro abụọ ahụ dị iche na nha ha, ọ bụkwa na ihuenyo nke Galaxy Note nwere sentimita 5.7, site na 5.5 sentimita asatọ nke Galaxy Edge. Site na ọdịiche ahụ, anyị na-ahụkarị myirịta n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile, na-echekwa mpaghara nke Cheta na ụlọ S-Pen, otu n'ime njirimara nke Samsung phablet.
N'ikpeazụ, a bịa n'ihe banyere imewe, anyị ga-egosiputa ọnụnọ ya n'akụkụ ala nke Galaxy Note 7 nke USB Type-C njikọ, nke na-anọchi Typedị-B nke Galaxy S7 Edge na-eweta.
Ọ bụrụ na anyị edebe ọdụ abụọ ahụ n'akụkụ ibe anyị, anyị ga-ahụ ọdịiche ole na ole n'ihe gbasara imewe, ọ bụ ezie na anyị ga-ahụrịrị obere esemokwu dị iche iche mgbe anyị tinyere Samsung Galaxy S8 na tebụl.
Ihuenyo nke Galaxy Note 7 na Galaxy S7 Edge bụ ihe dịka, ebe ha nwere otu akụkụ ahụ ma jiri otu teknụzụ, ọ bụ ezie na dị ka anyị hụburu na mbụ, ha dị iche na Corning Gorilla Glass 5 na - etinye onye kachasị ọhụrụ na ezinụlọ Galaxy Note.
Nke a bụ nke mbụ ọnụ na-ọkọnọ na ahịa na ụdị nchebe, nke na-enye anyị ukwuu na-eguzogide, tumadi iji zere na na ihe omume nke ọ bụla daa na ihuenyo nwere ike ejedebe na-agbajikwa ma ọ bụ na a karịa doro anya akara.
Banyere mkpebi nke ihuenyo ahụ, ọ bụ otu ihe ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ziri ezi n'ihi nnukwu nha ihuenyo 7, ọnụ ọgụgụ pikselụ kwa inch na-ebelata. N'agbanyeghị nkọwa a, anyị na-eche ihu ihu abụọ yiri nke ahụ, nke ga-enye anyị nsonaazụ pụtara ìhè.
Galaxy S7 Edge Atụmatụ na nkọwa
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Samsung Galaxy S7 Edge;
Akụkụ: 150.9 x 72.6 x 7.7 mm
Arọ: gram 157
Ngosipụta: 5.5-inch AMOLED nwere mkpebi nke pikselụ 2.560 x 1.440 na 534 ppi
Processor: Samsung Exynos 8890 8-core kpụrụ na 2.3 GHz
Ncheta RAM: 4 GB
Nchekwa dị n'ime: 32 ma ọ bụ 64 GB gbasaa site na kaadị microSD
Njikọta: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.2
Igwe n'ihu: 5 megapixels
Igwefoto na-agba ọsọ: ihe mmetụta 12 megapixel na ọkụ ikanam
Batrị: 3.600 mAh
Sistemụ nrụọrụ: Android 6.0 Marshmallow na TouchWiz nhazi akwa
Ihe ngosi Galaxy 7 na nkọwa
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Samsung Galaxy Note 7;
Akụkụ: 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Arọ: gram 169
Ngosipụta: 5.7-inch AMOLED nwere mkpebi nke pikselụ 2.560 x 1.440 na 515 ppi
Nchekwa dị n'ime: 64 GB gbasaa site na kaadị microSD
Sọftụwia na arụmọrụ
Banyere ngwanrọ nke ngwanrọ abụọ ahụ arụnyere na arụmọrụ ha na-enye anyị, ọ yitere ya nke ukwuu n'ihi na anyị na-echekwa ngwaọrụ abụọ anyị nwere ike ịsị na ha yitere.
Ke akpa itie ma na Rịba ama 7 na na Galaxy S7 Edge anyị na-ahụ otu processor; ma ọ bụ a Snapdragon 820 ma ọ bụ Exynos 8890, ihe nha anya nke RAM na nchekwa di n’ime ya nke diri.
Banyere ngwanrọ na njedebe abụọ anyị hụrụ Sistemụ arụmọrụ gam akporo, na nsụgharị 6.0, ọ bụ ezie na n'ihe banyere Nkọwa 7 ụdị ahụ dịwanye elu. N'okwu abụọ a anyị na-echerịrị ọbịbịa nke gam akporo ọhụrụ 7.0 Nougat, nke anyị nwere olile anya na a gaghị egbu oge karịa ka ọ mere n'oge ndị ọzọ na ngwaọrụ Samsung.
Ikike nke nhazi ToucWiz anaghị agbachitere nhọpụta ahụ ma ọ bụ Galaxy S7 Edge ma ọ bụ Galaxy Note 7, ọ bụ ezie na na nke ikpeazụ, ọ nwere nkwalite nke arụnyere, nke ee, agaghị enye anyị ọtụtụ mmelite ma e jiri ya tụnyere ihe anyị hụrụ na S7. . A na-atụ anya na ụdị ọhụụ a kachasị mma nke akwa mkpuchi ga-amalite iru ngwa ngwa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ South Korea.
Igwefoto, izu okè ka dị
Igwefoto nke Samsung Galaxy Note 7 enyebeghị anyị ihe ọhụụ ma ọ bụ ọrụ ọhụụ na ọ bụ otu ihe ahụ dị ka nke etinyere na Samsung Galaxy S7 Edge na nke anyị amaworị ike ya na nyocha anyị mere nke Samsung flagship.
Dị ka ụlọ ọrụ South Korea mere na Galaxy Note 5, nke a na-ahụtụbeghị na Europe, ha ekpebiela ịrịgo otu igwefoto dịka na ọkọlọtọ ha, na-achọpụta ezigbo nsonaazụ mgbe ị na-ese foto, na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume nke ezigbo echiche na Igwefoto Galaxy S7 natara, nke ọtụtụ ebe dị ka igwefoto kachasị mma n'ahịa dị na ngwaọrụ mkpanaka.
Samsung Galaxy Note 7 batrị bụ ihe jidere uche nke anyị niile bụ ndị soro ngosi nke ọhụrụ a phablet. Ma ọ bụ na ọtụtụ ndị nrụpụta na-erite uru dị ukwuu nke ụdị ọnụahịa a iji tinye batrị nke na-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu. Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe na Galaxy Note ọhụrụ ebe ọ nwere obere batrị na okwu nke mAh karịa Galaxy S7 Edge.
Batrị nke ọhụrụ Galaxy Note 7 na-aga 3.500 mAh, ebe nke Galaxy S7 Edge karịrị ya ruru 3.600 mAh. Na mbata nke S7 na ahịa, Samsung nwere ike imeziwanye nsogbu ọ nwere na batrị ma jisie ike kwadebe ọnụ ya na batrị nke ruru ọrụ ahụ. E gosipụtara ihe ngosi 7 na 100 mAh na-erughị Galaxy S7, mana ọ nweghị onye ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enwe obi abụọ na nnwere onwe karịrị ntụkwasị obi ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ nnwere onwe dị ukwuu na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ee, echere m Anyị agaghị enwe azịza maka ihe kpatara Samsung ejighị ohere dị ukwuu nke Galaxy Note 7 nye ya nnukwu batrị yana ikike inwere onwe ya nke anyị nwere ike ịchọta na Galaxy S7 Edge.
Ọnụahịa na mmechi
N'oge a anyị anaghị amata ọnụ ahịa nke ọhụụ ọhụrụ Noye 7, agbanyeghị na anyị nwere ike iche n'echiche nke okwu ọnụ abụọ yiri nke ahụ, ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị ka nke ahụ Galaxy S7 Edge nwere n'oge ya premiere na ahịa.
N'iburu n'uche na ọnụahịa nke ọnụ abụọ ahụ ga-adị nnọọ ka nke a, anyị agaghị echefu na iji Cheta 7 anyị ga-enwe ụfọdụ nhọrọ na ọrụ dịnụ nke anyị na-enweghị na Galaxy S7 Edge.
Banyere nkwubi okwu, anyị ga-ekwu nke ahụ na nke a duel o siri ike ịhọrọ otu ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka ọzọ. Na ọ bụ na anyị na-eche ihu abụọ yiri ọnụ na okwu nke ngwaike na arụmọrụ. Naanị ọdịiche dị iche iche anyị hụrụ bụ nha ihuenyo, yana ọrụ S-Pen rụrụ.
Dabere na onye ọrụ ọ bụla na karịsịa na mkpa ha, onye mmeri nke duel maka onye ọ bụla n'ime gị na-agụ isiokwu a nwere ike ịdị iche. N'okwu m, ọ bụrụ na m ga-ahọrọ otu, obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ Galaxy Note 7 maka ihuenyo ya dị ntakịrị karịa nke Galaxy S7 Edge na karịsịa maka S-Pen.
Isnye bụ onye mmeri gị na duel a n'etiti Samsung Galaxy S7 Edge na webatara Samsung Galaxy Note 7 na nso nso a?. Nye anyị echiche gị na oghere echekwara maka ikwu na post a ma ọ bụ jiri otu n'ime netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy Note 7 Vs Samsung Galaxy S7 Edge, duel nke titans
Enwere m mmasị maka Nkọwa 7, ana m ejide ya na Nkọwa 4 iji mee mgbanwe ahụ ozugbo ọ dị
Willi egwu dijo
Ha na-echefu banyere ngwa anya agụ na ndetu 7 eweta
Zaghachi Willi torres
Ọ bụ eziokwu, anyị echefula, ọ bụ ezie na ọ bụghị na ọ na-atụnye nnukwu ụba ...
Maka m na-akụda mmụọ .Ọtụtụ ihe m na-atụ uche a 4K ihuenyo, ọzọ RAM, FM Radio na m na-ahụbeghị ya n'ebe ọ bụla infrared njikọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na mgbe ọ bụla mkpa a eluigwe na ala ime akara m nwere ndetu 1 na dee 3 na na ọhụrụ nkọwa ọ bụghị uru ịzụta.
Security site na iris na ndị ọzọ, ha bụ chorraditas ndị ọzọ anaghị eme ka ọnụ ahịa ahụ ka mma
Ma ọ bụghị ya bụ ezigbo ọnụ ... enweghị ike ịgọnahụ ya mana ọ nweghị ihe ọhụụ na-agba gị ume ịgba ọsọ maka ya
Ọzọ banyere masịrị ...
Angel Reyes kwuru dijo
Agbanyeghị na mmasị m ga-abụ maka Nkọwa, m ka nwere Galaxy S6 onu, n'ikpeazụ ụdị ndị ọhụrụ ahụ na-eme ọsọ ọsọ iji weda ndị dị ugbu a ala, n'ezie maka ndị bu n'obi ime ihe niile Samsung chọrọ. N'aka nke m, echere m na oge eruola ka ụlọ ọrụ ahụ tinye ngwa dịka FM redio na ọdụ ya, ebe nke a ga-eme ka ha baa uru. Enwekwara m ihe ijuanya na ịbụ nnukwu ekwentị ọ gụnyere batrị mAh dị ala.
Zaghachi na Angel Reyes
tongo, na ihe banyere Snapdragon njehie na nkọwa ebe ọ bụ na s7 ihu Snapdragon na-abịa na 3 nke RAM ọ bụghị 4 dị ka ha na-ekwu n'ọtụtụ peeji, yana okwu nke ozodimgba iko 5 ugbu a ... anyị ga-ahụ. .. ha na-ere iko ahụ mgbe niile na iko ma na njedebe na-ewepụta ya na igbe ... ma ọ bụ na-ele ya anya ọjọọ «iko na-agbaji» ... na otu ọnụ ala ha si ere akụkụ ahụ mapụtara ọ dị ka Azụmahịa na ihe niile ^ _ ^ ... na ọnụego a ka m ga-alaghachi SONY ...
Azịza nye ??? ??
The iPhone 7 hụrụ na leaked video